Björklund: “Wadashaqeyn dhexmarta SD iyo Moderaterna waa dhibaato weyn” | Somaliska
Björklund: “Wadashaqeyn dhexmarta SD iyo Moderaterna waa dhibaato weyn”
Hogaamiyaha xisbga Liberal-ka Jan Björklund, ayaa ka hadlay wadashaqeynta u dhaxeeyneysa xisbiyadda xag jirka ah ee SD iyo xisbigga Moderat-ka. Wuxuu sheegay ineey dhaawac ku tahay asxaabta xulufadda ah.
“Waxaannu leenahay afkaaro kala duwan, tan ugu adagi waa xisbiga Moderat-ka oo albaabada u furay wada shaqeyn xisbiga SD” ayuu yiri Björklund oo u waramayey wakaaladda wararka Iswiidhan u faafisa ee TT. Wuxuu Björklund sheegay in la arkay hadda ka hor afarta xisbi ee xulufadda ah oo isku qabtay sida wadashqeyn ay u dhex mari karto. Qilaafka ku saleeysan kala fikir duwanaanta sida loola shaqeeynayo ayuu misna sheegay in ay jirtay xilligii xulufaddu gar wadeenka ka ahaayeen hogaanka dalka.
Björklund, ayaa horey u sheegay in uu u balan qaaday labbo wiil oo uu korsaday eeysan waligood waa sida uu hadalka u dhigaye wada shaqeyn aannu la yeelan karin xisbigga xag jirka ah ee SD. Wixii sheegay in balan qaadkaasi ay xitaa ku jirto hooyadiis oo asalkeedu yahay noorwijiyaan ka soo carartay xilligii Naasigii Jarmalka duulaanka ku qaaday dalkaaasi Noorweey.
“In aan wada shaqeyn la yeesho xisbi aamisan in wiilasheeyda eeysan nooqn karin iswiidhish, xisbi misna cirifka ku haya naasiyiinta kalifay in hooyadeey dartood uga soo cararto dalkeeda, taasi weligeed dhici meeyso” ayuu yiri Björklund oo si cad u muujiyey sida uusan xisbigiisa u dooneyn wada shaqeyn dhex marta xisbigga SD. Wuxuu sidoo kale sheegay in intii awoodiisa ah ku da daalayo tan iyo inta laga gaarayo doorashadda soo socota sidii asxaabta xulufadda ahi ay markale hogaanka ula wareegi lahaayeen iyagoo aan wax gacan ah ka helin SD. Haddii ay taasi dhici weeysana uu ka door bidayo in wada shaqeyn dhex marto xisbiga talada haya ee Socialdemokrat-ka.
Deenmark oo xabsi iyo musaafuris ku xukuntay soomaali gurigiisa laga helay miino